အမေးများသောမေးခွန်းများ - ကုန်သွယ်မှုကိုလေ့လာပါ။
Q1 ။ Learn2Trade ဆိုတာဘာလဲ။
Learn2Trade သည်ကုန်သည်များအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အချာဖြစ်ပြီးအရည်အသွေးမြင့်မားသော Forex market analysis၊ အသေးစိတ်လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်စျေးကွက်ထဲမှနောက်ဆုံးသတင်းများကိုပံ့ပိုးပေးသည့်အာရုံစိုက်မှုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ညွှန်းကိန်းများ၊ cryptocurrencies နှင့် Forex trading တို့ကိုအဓိကထားသည်။ Learn2Trade သည်အချိန်နှင့်တပြေးညီထောက်ပံ့ပေးသည် ကုန်သွယ်အချက်ပြမှုများ ဤအပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောကုန်သွယ်မှုအချက်ပြများအပြင်အမျိုးမျိုးသောကုန်သည်များအတွက်နက်ရှိုင်းသောအသိပညာဗဟုသုတကိုမြှင့်တင်ထားသည်။ ၎င်းတွင်ကျယ်ပြန့်သော Forex မဟာဗျူဟာများအပိုင်း၊ သင်ထိုတွင်ရှာတွေ့နိုင်သည့်အကောင်းဆုံး Forex Trading သင်တန်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အလွန်ချစ်မြတ်နိုးသော Learning Center တို့ပါဝင်သည်။
Q2 ။ ကျွန်ုပ်၏ကုန်သွယ်မှုတိုးတက်စေရန်အတွက်အထောက်အကူပြုသောသင်ခန်းစာ (၂) သည်မည်သည့်ပညာရေးကိရိယာများကိုပေးသနည်း။
Learn2Trade ၏ကျွမ်းကျင်သောကုန်သည်များနှင့်လေ့လာသုံးသပ်သူများအဖွဲ့သည်အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများရရှိစေရန်သူတို့၏စျေးကွက်ကျွမ်းကျင်မှုကိုပေါင်းစပ်သည်။
ထိပ်တန်း free- နှင့်ပရီမီယံ Forex, ကုန်စည်, စတော့ရှယ်ယာအညွှန်းကိန်းများနှင့် cryptocurrency ကုန်သွယ်အချက်ပြမှုများ။
မြောက်မြားစွာ Forex ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများ.
အမျိုးမျိုးသောငွေကြေးဆိုင်ရာကိရိယာများ၊ ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရွေးချယ်စရာများ၊ Forex ပွဲစားများ၊ forex trading အကြံဥာဏ်များစသည်တို့ပါဝင်သောကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာအယူအဆများနှင့်အချက်အလက်များပါ ၀ င်သည့်အစွမ်းထက်သော '' လေ့လာရေးစင်တာ '' ။
Learn2ကုန်သွယ်ရေး Forex Trading သင်တန်း။
Q3 ။ Learn2Trade ၏အချက်ပြမှုနှင့် Forex trading မဟာဗျူဟာများကိုအခမဲ့အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်တယ်။ သင်လုပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့ Forex Trading အချက်အလက်များအသုံးပြုရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ forex အချက်အလက်များစာမျက်နှာသို့သွားပြီးသင်နောက်ဆုံးပေါ်ရေတိုနှင့်ရေရှည်ကုန်သွယ်မှုအချက်အလက်များအသေးစိတ်အချက်အလက်များ terminal တွင်ရှာတွေ့လိမ့်မည်။ ငါတို့မှာလည်းရှိတယ် ပရီမီယံ Forex အချက်ပြဝန်ဆောင်မှု ကုန်သွယ်ရေးအချက်ပြမှုအတွက်အီးမေးလ်နှင့်မိုဘိုင်းအချက်ပေးမှုများပါဝင်သည့်အပိုဆောင်းအကျိုးကျေးဇူးများကိုပေးသည်။
လေ့လာပါ။2ကုန်သွယ်ရေး၏ Forex Trading မဟာဗျူဟာများကိုအခမဲ့အသုံးပြုနိုင်သည်။ အခြေခံ၊ နည်းပညာနှင့်လူကြိုက်များသော Forex trading မဟာဗျူဟာများအပါအ ၀ င်ကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာအမျိုးမျိုးကိုရှာရန်အထက်ပါ link သို့သွားပါ။
Q4 ။ Learn2Trade ၏ကုန်သွယ်ရေးပညာရေးကို အသုံးချ၍ အနိုင်ရသော Forex ကုန်သည်တစ် ဦး အဖြစ်အသုံးချရန်တိကျသောပညာရေးနောက်ခံသို့မဟုတ် forex trading အတွေ့အကြုံရှိရန်လိုအပ်ပါသလား။
Learn2Trade ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိ Forex Trading ပညာရေးနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏ကြွယ်ဝမှုကိုခံစားနိုင်ရန်ဖန်ရှင်အရည်အချင်းများသို့မဟုတ် Forex trading အတွေ့အကြုံများမလိုအပ်ပါ။ သင်စောစောစီးစီးမြန်လေလေ၊ သင်အောင်မြင်ပြီးအမြတ်အစွန်းများစွာသော Forex ကုန်သည်ဖြစ်လာသည်။
သင် Forex အရောင်းအဝယ်အကြောင်းဘာမှမသိဘူးဆိုရင်တောင်ဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့စျေးကွက်ကိုသင်လျင်မြန်စွာပါ ၀ င်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အတွေ့အကြုံမရှိသောကုန်သည်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အမြတ်အစွန်းများသော Forex trading အချက်အလက်များကိုနည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်စျေးကွက်အချိန်ကာလများနှင့် ပတ်သက်၍ မစိုးရိမ်ပါ။ ဤသည်မှာ Forex trading ၏အကြောင်းရင်းများကိုလေ့လာရင်းကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များနှင့်လေ့လာသုံးသပ်သူများ၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုအသုံးချရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
Q5 ။ ငါ Forex ကုန်သွယ်စတင်နှင့်သင်၏ကုန်သွယ်အချက်ပြမှုများကိုအသုံးပြုချင်ပါတယ်။ ငါဘယ်ကစ
ကျွန်ုပ်တို့၏တစ် ဦး နှင့်အတူ Forex ကုန်သွယ်အကောင့်ကိုဖွင့်ပါ အကြံပြု Forex ပွဲစားများ.
သင်၏ကုန်သွယ်မှုအကောင့်ထဲသို့သင်၏ကန ဦး အရင်းအနှီးကိုအပ်နှံပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွားရောက်ကြည့်ရှု Forex အချက်ပြမှုများ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကုန်သွယ်မှုအကောင့်ထဲသို့ကူးယူခြင်းနှင့်ကူးယူခြင်းအချက်ပြချက်များကိုကူးယူပါ။
Q6 ။ ကျွမ်းကျင်သော Forex ကုန်သည်ဖြစ်ချင်ပါတယ် Learn2Trade 'Money Makers အတွက်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းညွှန်' က FX ကုန်သည်တစ်ယောက်ဖြစ်ရန်ကျွန်ုပ်ကိုမည်သို့ကူညီနိုင်မည်နည်း။
ဤသည်အစွမ်းထက် Forex ကုန်သွယ်သင်တန်း Learn2Trade မှကမ်းလှမ်းသောအချက်အလက်များသည်အခန်း (၁၀) ခုပါ ၀ င်သောကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များပါဝင်သည်။
ဤလမ်းညွှန်တွင်အခြေခံနှင့်အဆင့်မြင့် Forex trading ဝေါဟာရများ၊ နည်းပညာနှင့်အခြေခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်၊ နည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းအမျိုးမျိုးကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်၊ ကွဲပြားခြားနားသောစျေးကွက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအကြားခွဲခြားသိမြင်နိုင်ပုံ၊ Elliot Wave သီအိုရီကိုမည်သို့ကျင့်သုံးရမည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်တန်း Forex Trading လမ်းညွှန်တွင်သင်ကျွမ်းကျင်သော Forex ကုန်သည်တစ် ဦး ဖြစ်လာရန်လိုအပ်သည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
Q7 ။ ငါ Forex နှင့်ကုန်ပစ္စည်းများ, ညွှန်းကိန်းများနှင့် cryptocurrencies ကဲ့သို့သောအခြားတူရိယာကုန်သွယ်စတင်ချင်တယ်။ ငါသည်လည်းလူမှုရေး / ကူးယူရောင်းဝယ်မှုကိုစိတ်ဝင်စားသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ စိတ်ချရသောပွဲစားတစ်ယောက်ရှာရန်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပေးနိုင်မလား။
လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ Learn2Trade ၏ထိပ်တန်း ဦး စားပေးလုပ်ငန်းများအနက်တစ်ခုချင်းစီ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသောအကောင်းဆုံး Forex ပွဲစားကိုရှာဖွေရန်အလားအလာရှိသောကုန်သည်များကိုလမ်းညွှန်ပေးခြင်း။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောပွဲစားတစ် ဦး နှင့်ပူးပေါင်းရန်လွယ်ကူသောကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းနှင့်ကုန်သွယ်ရေးကိရိယာကောင်းများနှင့်ပေါင်းစပ်ရန်အလွန်အရေးကြီးကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိသည်။
သင်၏တိကျသောကုန်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက်များအတွက်မှန်ကန်သောပွဲစားကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသောပွဲစားများစာမျက်နှာကိုကြည့်ပါ ခြွင်းချက် Forex ပွဲစားများ ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ငွေကြေးများ၊ အညွှန်းကိန်းများနှင့် cryptocurrencies အပေါ်ယှဉ်ပြိုင်မှုပျံ့နှံ့စေသည်။ ဤပွဲစားများသည်ဥပမာအားဖြင့်ဖြစ်သည် eToroလည်းလူမှုရေးကုန်သွယ်လွယ်ကူချောမွေ့။
Q8 ။ ငါပြီးသား Forex ကုန်သွယ်အကောင့်ရှိသည်။ Learn2Trade မှပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအပြည့်အ ၀ ရရှိနိုင်စေရန်မည်သို့ပြုလုပ်နိုင်သနည်း။
2 ကုန်သွယ်ရေးကိုလေ့လာပါ ပရီမီယံကုန်သွယ်အချက်ပြမှုများ ကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းရန်ရှိသည်အားလုံး၏အားသာချက်ကိုယူစတင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးအချက်အလက်များသည်သင့်အားအီးမေးလ်နှင့်မိုဘိုင်းအချက်ပေးခြင်းဖြင့်သင့်ကိုပို့ဆောင်ခြင်း၏ကြီးမားသောအားသာချက်ဖြစ်သည်။ Learn2Trade ၏အရောင်းအဝယ်အချက်အလက်များကိုသင်၏ကုန်သွယ်မှုအကောင့်ထဲသို့ကူးယူခြင်းအားဖြင့်သင်သည်အစပြုသူသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်ဖြစ်စေဘဏ္financialာရေးတူရိယာအမျိုးမျိုးကိုရောင်းခြင်းမှအကျိုးရရှိနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်များနှင့်လေ့လာသုံးသပ်သူများကသင့်အတွက်အမြတ်အစွန်းကုန်သွယ်မှုများကိုစစ်ထုတ်ပစ်ပါစေ
ဟုတ်ပါတယ်, ငါတို့နေ့တိုင်းရှိသည် Forex သတင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်တန်းလေ့လာသုံးသပ်သူများအဖွဲ့မှစျေးကွက်မွမ်းမံခြင်းကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ။ သင့်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောကုန်သည်ဖြစ်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၌ရှိသောပညာရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာအားလုံးကိုမမေ့ရန်။
Q9 ။ ကျွန်ုပ်မည်သည့် Forex Trading ပလက်ဖောင်းကိုသုံးသင့်သည်ကိုမသေချာပါ။ မှန်ကန်သောကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းကိုရွေးချယ်ရန်ကျွန်ုပ်အားကူညီရန်သင့်တွင်ကောင်းမွန်သောအချက်အလက်များရှိပါသလား။
ဟုတ်တယ်၊ ငါတို့အားလုံး အကြံပြုပွဲစားများ အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းကိုဆက်ကပ်။ ဤပလက်ဖောင်းများကိုမည်သည့်ကတိက ၀ တ်သို့မဟုတ်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားမျှမပြုလုပ်ရန်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သော demo account ကိုဖွင့်ပါ။ သင်သည် MT4 ပလက်ဖောင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အဆင့်မြင့်လူမှုကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုလိုအပ်သည်ဖြစ်စေ၊ သင်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသည်။
ယုံကြည်စိတ်ချရသော Forex Trading ပလက်ဖောင်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုပါ အကောင်းဆုံး Forex Trading Platforms ယခုစာမျက်နှာ!
Q10 ။ Learn2ကုန်သွယ်ရေး၏ကုန်သွယ်ရေးအချက်ပြမှုဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
Learn2ကုန်သွယ်မှုတွင်ကျွမ်းကျင်သောစျေးကွက်လေ့လာသူများဖြစ်သောကျွမ်းကျင်သောကုန်သည်များအဖွဲ့ရှိသည်။ ဤကုန်သည်များသည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးကုန်သွယ်မှုအခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေရန်အတွက်၊ Forex၊ ကုန်စည်နှင့်အခြားစျေးကွက်များကိုစဉ်ဆက်မပြတ်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာသုံးသပ်သူများကအလွန်ကောင်းမွန်သောကုန်သွယ်ရေးအခွင့်အလမ်းများကိုတွေ့သောအခါသူတို့သည်ကုန်သွယ်ရေးအတွေးအခေါ်များကိုရေရှည်နှင့်ရေတိုကုန်သွယ်မှုအချက်ပြပုံစံများ (ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်သွယ်ရေးသတိပေးချက်များ) တွင်တင်ကြသည်။ Forex အချက်ပြမှုများ terminal ကို။ ဤရွေ့ကားကုန်သွယ်အချက်ပြမှုများထိုကဲ့သို့သောအမြတ်အစွန်းယူနှင့်အဖြစ်အသေးစိတ်နှင့်အတူတင်ခဲ့သည် ရပ်တန့်-အရှုံး parameters တွေကိုနှင့်သင်၏ကုန်သွယ်အကောင့်သို့ကူးယူနိုင်ပါတယ်။
Q11 ။ Learn2Trade ၏အရောင်းအဝယ်အချက်ပြမှုကိုကျွန်ုပ်ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ။
Learn2ကုန်သွယ်ရေးအချက်အလက်များအသုံးပြုခြင်းသည်အလွန်လွယ်ကူသည်။ အရောင်းအ ၀ ယ်အချက်ပြမှုများကိုလိုက်နာပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်ရှိအချက်ပြ terminal တွင်ပေါ်လာသည် Forex အချက်ပြစာမျက်နှာ သင်၏ကုန်သွယ်မှုအကောင့်ထဲသို့ကုန်သွယ်ရေးအချက်ပြမှုများ၏အချက်အလက်များ (Stop loss နှင့်အမြတ်မှာယူမှုများကိုယူပါ) ကိုကူးယူပါ။ ဤတွင်အပေါ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြတ်အစွန်းကုန်သွယ်အချက်ပြမှုများကိုသုံးစွဲဖို့ဘယ်လို.
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Forex အချက်ပြ terminal တွင်ကုန်သွယ်ရေးအချက်ပြမှုအသစ်တစ်ခုပေါ်လာတိုင်းသင်အကြောင်းကြားရန်လိုပါက၊ သင်ဝယ်ယူလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းသို့စာရင်းသွင်းပါ။ ပရီမီယံ Forex အချက်ပြမှုများ ယခုဝန်ဆောင်မှု!
Q12 ။ သင်ကြားမှု2ကုန်သွယ်ရေးရဲ့ကုန်သွယ်ရေးအချက်ပြမှုကိုဘယ်လိုလေ့လာမလဲ။
Learn2Tradef ၏အတွေ့အကြုံရှိသောလေ့လာသုံးသပ်သူများနှင့်ကျွမ်းကျင်သည့်ကုန်သည်များအဖွဲ့သည်တစ်ပတ်လျှင်ငါးရက်ရှာဖွေသည့်ဘဏ္marketsာရေးစျေးကွက်များကိုနာရီနှင့်ချီ။ လိုက်နာသည်။ ထူးချွန်ကုန်သွယ်ရေးအခွင့်အလမ်းများ ၏အားသာချက်ယူရန်။ နည်းပညာနှင့်အခြေခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှစ်မျိုးလုံးကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာသုံးသပ်သူများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးစွဲသူများအားကုန်ပစ္စည်းအချက်ပြများပိုမိုပေးနိုင်ရန်များစွာကြိုးပမ်းကြသည်။
Q13 ။ သင်၏ကုန်သွယ်ရေးအချက်ပြမှုအသုံးပြုခြင်းအတွေ့အကြုံကိုဖြည့်စွက်ရန်ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ သင်၏အချက်ပြများကိုပိုမိုထိရောက်စွာအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်ကူညီရန်ကျွန်ုပ်သင်ယူသင့်သည့်အရာတစ်စုံတစ်ခုရှိပါသလား။
အနည်းဆုံးသင်ယူရန်အထူးအကြံပြုလိုသည် Forex ကုန်သွယ်၏အခြေခံ။ Learn2Trade ၏အရောင်းအဝယ်အချက်ပြမှုများကိုအသုံးပြုသောအခါသင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအရင်းအနှီးကိုထိန်းသိမ်းရန်အတွက်သင်လိုအပ်သောစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအမံများရှိသည်။ ဤအတိုင်းအတာ၏ဥပမာကောင်းတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်သွယ်ရေးအချက်ပြမှုနှင့်သင်အသုံးပြုသည့်သြဇာပမာဏကိုကန့်သတ်ရန်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် Forex trading ဝေါဟာရများ၊ ကုန်သွယ်မှုအားကွပ်ကဲခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်နည်းပညာနှင့်အခြေခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတို့ကိုနားလည်ရန်အခြေခံလိုအပ်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်း ၀ င်ပါသလား။ ပိုက်၊ သြဇာ၊ ရပ်တန့်မှုဆုံးရှုံးခြင်း၊ အမြတ်ယူခြင်း၊ အဓိကငွေကြေးအတွဲများ၊ အရှည်၊ တိုတို၊ လမ်းကြောင်းစသဖြင့်။ ဤအရာများအပြင်အခြားရိုးရှင်းသောနှင့်အဆင့်မြင့်ကုန်သွယ်ရေးသဘောတရားများနှင့်မဟာဗျူဟာများစွာကိုလေ့လာရန် Learn2Trade Learn Center သို့ယနေ့လေ့လာပါ။
Q14 ။ လူမှုကုန်သွယ်မှုဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
လူမှုရေးကုန်သွယ်မှု ကူးသန်းရောင်း ၀ ယ်ခြင်းနှင့်လူမှုဆက်သွယ်မှုနှစ်မျိုးစလုံးကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသည့်ခေတ်သစ်အွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်ပြုလုပ်သည် (ကုန်သွယ်မှု / စျေးကွက်သတင်းအချက်အလက်ကိုဗဟိုပြုသည်) သည်ဤလူမှုကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းများ၏မတူညီသောအသုံးပြုသူများအကြား။
လူမှုရေးကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းများမှာကဲ့သို့ eToro, ကုန်သွယ်ရေးအတွေးအခေါ်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအဖွဲ့ဝင်များအကြားအလွယ်တကူမျှဝေနိုင်ပါသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်ကုန်သည်များသည်ကျော်ကြားသောအတွေ့အကြုံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏အရောင်းအ ၀ ယ်များကို၎င်းတို့၏ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်များသို့၎င်းတို့ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုအရင်းအနှီး၏အချို့သောအစိတ်အပိုင်းများကိုခွဲဝေပေးခြင်းဖြင့်အလိုအလျောက်ကူးယူနိုင်သည်။
Q15 ။ Forex၊ စတော့ရှယ်ယာအညွှန်းနှင့်ကုန်ပစ္စည်းစျေးကွက်များတွင်ကျွန်ုပ်မည်သို့အရောင်းအ ၀ ယ်သို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွင်ပါ ၀ င်ရမည်နည်း။ (ဤပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းများမှငွေရှာရန်ကွဲပြားသောနည်းလမ်းများကားအဘယ်နည်း။ )
ဤရွေ့ကား Forex, ကုန်စည်နှင့်စတော့ရှယ်ယာညွှန်းကိန်းကိုင်တွယ်ရန်အထင်ရှားဆုံးနည်းလမ်းများဖြစ်ပါသည်:
တိုက်ရိုက်ကုန်သွယ်မှု ကုန်သွယ်အချက်ပြမှုများ / ကုန်သွယ်သတိပေးချက်များ.
လူမှုရေး / ကူးယူကူးသန်းရောင်း - အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များ၏ကုန်သွယ်မှုများကိုသင်၏ကုန်သွယ်မှုအကောင့်ထဲသို့တိုက်ရိုက်ကူးယူပါ။
Q16 ။ ဘယ်လိုရလဒ်မျိုးလဲ Learn2ကုန်သွယ်ရေးဟာသူတို့ရဲ့ Forex trading အချက်များကြောင့်အောင်မြင်ခဲ့တာလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်များနှင့်လေ့လာသုံးသပ်သူများအဖွဲ့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်သွယ်ရေးအချက်ပြဝန်ဆောင်မှုကိုပထမဆုံးစလုပ်ပြီးကတည်းကထောင်ပေါင်းများစွာသော pips များကိုဈေးကွက်ထဲမှဆွဲထုတ်ခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထူးခြားသော pips ၄၉၀၇ ကိုအိတ်ကပ်ထဲမှ ၁၂ လတွင် ၁၁ ခုအမြတ်ရရှိခဲ့သည်။ Learn 2016 Trade ကိုစစ်ဆေးပါ 2018 အချက်ပြဤနေရာတွင်သတင်းပို့ပါ.
Q17 ။ Forex trading နှင့်ဆက်စပ်သောအန္တရာယ်များကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ထိထိရောက်ရောက်စီမံနိုင်မည်နည်း။
Forex trading နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အန္တရာယ်များကိုလျှော့ချရန်အစွမ်းထက်ဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ Forex trading ပညာရေးနှင့်မိမိကိုယ်ကိုတပ်ဆင်ရန်ဖြစ်သည်။ မင်းဒါကိုစိတ်ထဲထားခဲ့မယ်ဆိုရင်မင်းဟာနေရာမှန်ကိုတိတိကျကျရောက်နေတယ်။ Learn2Trade's ၏လေ့လာရေးစင်တာသည် Forex trading နှင့်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာတန်ဖိုးရှိသောသတင်းအချက်အလက်များကိုထုပ်ပိုးထားသည်။ ၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Forex Trading သင်တန်း၊ Forex Trading အကြံပေးချက်များ၊ Forex Trading မဟာဗျူဟာများပါဝင်သည်။ Forex အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု, ပြီးတော့နောက်ထပ်အများကြီးပဲ။
Forex trading ကြောင့်အန္တရာယ်များစွာကိုရှောင်ရှားရန်နောက်ထပ်စွမ်းအားကောင်းသောနည်းလမ်းမှာအတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များကို လိုက်၍ ကူးယူရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လူမှုရေးကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင် Learn2Trade ၏အရောင်းအဝယ်အချက်ပြမှုသို့မဟုတ်လူကြိုက်များသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ (ကူးယူကုန်သည်များ) ကိုကူးယူခြင်းဖြစ်စေခိုင်မာသောကုန်သည်များ၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုရယူခြင်းသည်အားသာချက်များများစွာရှိသည်။
Q18 ။ Forex, စတော့ရှယ်ယာညွှန်းကိန်းများနှင့်ကုန်စည်များရောင်းဝယ်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်ငွေမည်မျှရနိုင်မည်နည်း။
ကောင်းကင်ကန့်သတ်ချက်ပါပဲ ဤစျေးကွက်ကြီးများအတွက်ကုန်သွယ်ကြောင်းမြင့်မားသောအရည်တူရိယာကိုဆက်ကပ်။ ဤအချက်ကကုန်သည်များအနေဖြင့်ကုန်သွယ်ရေးရာထူးကြီးကြီးမားမားချထားပေးနိုင်ခြင်းမရှိသလောက်နည်းပါးသည်။ ၎င်းသည်ပျမ်းမျှအားဖြင့်လက်လီရောင်းချသူများအနေဖြင့်ဝယ်ယူသူများနှင့်ရောင်းသူများ၏ဘယ်တော့မှကုန်ဆုံးနိုင်မည်မဟုတ်သည့်အလွန်မြင့်မားသောအရွယ်အစားရှိသောအွန်လိုင်းစီးပွားရေးကိုတည်ဆောက်ရန်ခွင့်ပြုသည့်အလွန်ကောင်းသည့်အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ Forex၊ ကုန်ပစ္စည်းနှင့်အခြားစျေးကွက်များတွင်ငွေရှာရန်သင်ကိုယ်တိုင်ကုန်သွယ်မှုအားလုံးပြုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်လျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်နှင့်သင့်လျော်သောကုန်သွယ်မှုပညာရေးလိုအပ်သည် (ကူးယူကူးယူခြင်းနှင့်လေ့လာခြင်း2ကုန်သွယ်မှု၏ကုန်သွယ်ရေးအချက်ပြမှုများကိုလိုက်နာခြင်းသည်အလွန်နည်းပါးသည်) ။ အကယ်၍ သင်သည်ထိပ်တန်းအဆင့်ကုန်သွယ်ရေးပညာရေးကိုသင်ရှာဖွေနေသည်ဆိုလျှင်၊ စတင်ရန်ကောင်းသောနေရာမှာကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာရေးစင်တာဖြစ်သည်။
Q19 ။ နေ့တိုင်း Forex ဇယားတွေကိုကြည့်ရတာနာရီပေါင်းများစွာမတတ်နိုင်ပါ။ Forex ကိုအချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်ကုန်သွယ်ရန်ဖြစ်နိုင်ပါသလား။
အမှန်ပင်ဖြစ်သည်! များစွာသောအောင်မြင်သော Forex ကုန်သည်များသည်ကုန်သွားသည်သို့မဟုတ်ကြာရှည်အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ကြသည်။ ၎င်းမှာအချိန်များစွာမလိုအပ်ပါ။ အလုပ် ၈-၅ ရှိသော်လည်းသင်ဤနည်းလမ်းဖြင့် FX ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှု၏ရလဒ်ကောင်းများကိုရရှိနိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ သင်၏အချိန်သည်အကန့်အသတ်သာရှိပါက Forex ကိုကုန်သွယ်ရန်အခြားနည်းလမ်းများရှိသည်။ ဤနည်းလမ်းများအနက်မှတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည် ပရီမီယံ Forex အချက်ပြမှုများ။ နောက်တစ်နည်းမှာလူမှုရေးပွဲစားတစ် ဦး နှင့်လူမှုရေးအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည် eToro.
လူမှုရေးအရောင်းအဝယ်ပြုခြင်းဖြင့်အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များ၏ကုန်သွယ်မှုသည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုအကောင့်ထဲသို့အလိုအလျောက်ကူးယူသွားသည်။ သင်ဇယားများကိုကြည့်ရှုရန်သို့မဟုတ်စျေးကွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်မလိုအပ်သောကြောင့်၎င်းသည်သင့်ကိုအချိန်များစွာသက်သာစေသည် အားလုံးမှာ!
Q20 ။ ငွေအနည်းငယ်ဖြင့်ငွေစက္ကူကို သုံး၍ ဖြစ်စေ၊ လေ့ကျင့်ခန်းအကောင့်တစ်ခုတွင်ဖြစ်စေ Forex ကိုစတင်ရောင်းလို့ရသလား။
အဲဒါဟုတ်ပါတယ်။ သင်သည် Forex ကိုဒေါ်လာ ၁၀၀ သာဖြင့် စတင်၍ စတင်နိုင်သည်။ ရရှိနိုင်မှု သြဇာ အသေးစားကုန်သည်များအားဒေါ်လာ ၁၅ ဒေါ်လာမပြည့်သော Forex trades များ (micro pair) ၁၀၀၀ ကိုဖွင့်နိုင်စေသည်။ ၎င်းသည်သင်၏ပွဲစားအားကမ်းလှမ်းသည့်ပမာဏပေါ်တွင်မူတည်သည်။
သူတို့ရဲ့အရင်းအနှီးကိုမစွန့်စားခင်မှာ FX market နဲ့အရင်ရင်းနှီးချင်တဲ့ကုန်သည်တွေကအခမဲ့သရုပ်ပြအကောင့်ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ Forex ပွဲစားများ FX အရောင်းအဝယ်ကို virtual ပိုက်ဆံဖြင့်လေ့ကျင့်ပါ။
Q21 ။ leverage ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အမြတ်သို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုကို Forex trading နှင့်မည်သို့သက်ရောက်နိုင်သနည်း။
ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်ဆိုရင် Forex trading နဲ့သြဇာသုံးပြီးကုန်သွယ်ရေးအနေအထားကိုငွေအနည်းငယ်နဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်အချို့နှင့်အတူ Forex ပွဲစားများ ၁: ၅၀၀ ကိုသြဇာပေးသူ၊ ဒေါ်လာ ၂ ဒေါ်လာဖြင့် USD / JPY ငွေကြေးအတွဲ၏ယူနစ် ၁၀၀၀ ကိုသင်ရောင်းနိုင်သည်။ 1K ၏အယူအဆကုန်သွယ်မှုအရွယ်အစား အမေရိကန်ဒေါ်လာ / JPY အနေအထားဒေါ်လာ 1000 ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုလိုတာက ၁: ၅၀၀ သြဇာနဲ့ဆိုရင်မင်းကဒေါ်လာ ၂ ဒေါ်လာလောက်ပဲလိုတယ် ဖွင့်လှစ် $ 1000 တန်ဖိုးရှိအနေအထားကို။ ကျန်တဲ့ဒေါ်လာ ၉၉၈ ကို Forex ပွဲစားထံမှချေးယူသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကုန်သည်တစ်ယောက်ကဒေါ်လာ ၂ ဒေါ်လာထက်ပိုလိုလိမ့်မယ် ထိန်းသိမ်းရန် ဖွင့်လှစ်တခါဒီအနေအထား။ Forex ကုန်သွယ်ရန်သြဇာကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အကျိုးအမြတ်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုနှစ်ခုလုံးကိုတိုးပွားစေနိုင်သည်။ အလွန်အကျွံမြှင့်တင်ခြင်းများအသုံးပြုခြင်းသည်စတင်ကုန်သည်များသည် FX market အတွင်းမှငွေများဆုံးရှုံးရခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။
Q22 ။ နိုင်ငံရေးနှင့်စီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုများဖြစ်ပေါ်နေသောအချိန်များတွင်ကုန်သွယ်မှု Forex ၏အားသာချက်များကားအဘယ်နည်း။
အချို့သောကုန်သည်များသည်မတည်ငြိမ်မှုကိုအရင်းအနှီးစျေးကွက်များသို့ရောက်သောအခါစတော့ (တို) ကိုရောင်းလိုကြသည်။ ၎င်းသည်အကြံဥာဏ်ကောင်းတစ်ခုဟုထင်ရသော်လည်း၎င်းသည်ရှယ်ယာများ ၀ ယ်ခြင်းထက်ရှည်လျားသောအန္တရာယ်ကိုသယ်ဆောင်သည်။ အကြောင်းမှာစတော့ကုန်သွယ်မှုတိုတောင်းသောကုန်သွယ်မှုအတွက်အများဆုံးငွေပေးချေမှုသည် ၁၀၀% ဖြစ်၍ ၎င်း၏စျေးနှုန်းသည်သုညသို့ကျသွားသောအခါဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, တိုတောင်းသောစတော့ရှယ်ယာကုန်သွယ်မှုအပေါ်အလားအလာဆုံးရှုံးမှုသီအိုရီအဆုံးမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
ဤအချက်နှင့်ဆန့်ကျင်။ ကုန်သည်တစ် ဦး သည်ကြာရှည်စွာ (၀ ယ်သည်) သို့မဟုတ်ငွေကြေးအတွဲတစ်ခုကိုရောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ ရောင်းသည်ဖြစ်စေနှစ်ဖက်စလုံးမှအများဆုံးအရှုံးမှာ ၁၀၀% ဖြစ်ပြီးအများဆုံးအမြတ်သည်သီအိုရီအကန့်အသတ်မရှိဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်ကငွေကြေးအတွဲတစ်ခုကိုဝယ်သည်ဖြစ်စေ၊ ရောင်းသည်ဖြစ်စေသင်တိုတောင်းသောစတော့ရှယ်ယာများနှင့်ဆက်နွှယ်သောစွန့်စားမှုမှဆုလာဘ်ကိုသင်မရင်ဆိုင်ရပါ။ ဤသည် Forex ကုန်သွယ်စတော့စျေးကွက်အန္တရာယ်ရှိသည့်အခါအချိန်များတွင်စတော့ရှယ်ယာထက်ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်လျော့နည်းအန္တရာယ်များစေသည်။ Forex ဈေးကွက်တွင်အရောင်းအဝယ်ပြုခြင်း၏နောက်ထပ်အားသာချက်မှာကြီးမားသည် ငွေဖြစ်လွယ် အထူးသဖြင့်အဓိကငွေကြေးအတွဲတွေနဲ့ပါ။
Q23 ။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးဘယ်လောက်မတည်ငြိမ်မှုရှိပါသလဲ
ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးသို့မဟုတ် cryptocurrencies, အလွန်အမင်းမတည်ငြိမ်သောဖြစ်ကြသည်။ Forex သည်မတည်ငြိမ်သော်လည်း၊ cryptocurrencies သည် ပို၍ ပင်များသည်။ အဓိကကျသောငွေကြေးများသည်တစ်ရက်တွင် ၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရွှေ့ပြောင်းခဲသည်။ သို့သော် Cryptocurrencies သည်တစ်နေ့လျှင် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရွှေ့သည်။ ငါတို့ 2019 ခုနှစ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အကောင်းဆုံး Cryptocurrency မကြာသေးမီကတစ်ရက်တည်းတွင် ၇၀% ကျော်ရရှိခဲ့သည်။
Q24 ။ cryptocurrencies ရောင်းဝယ်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်သြဇာကိုသုံးသင့်သနည်း။
Cryptocurrenciesဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးအဖြစ်လည်းလူသိများသောအလွန်တည်ငြိမ်မှုမရှိသောကြောင့်သြဇာကိုထိန်းညှိသင့်သည်။ သင်၏ forex အရောင်းအဝယ်တွင်သင် x10 သြဇာကိုအသုံးပြုပါက cryptocurrency trades များအတွက် crypto market သည် ၁၀ ဆပိုမိုမတည်ငြိမ်သောကြောင့်သြဇာကို ၈-၁၀ ကြိမ်လျှော့ချရပါမည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်မည်သည့်သြဇာမျှမရှိဘဲကုန်သွယ်သင့်သည်ဟုဆိုလိုသည်။
မတည်ငြိမ်မှုများထပ်မံပေါ်ပေါက်လာပါကသင်၏သြဇာကိုပိုမိုလျှော့ချသင့်သည်။ အမြတ်အစွန်းကောင်းရဖို့အတွက်စိတ်မပူပါနဲ့၊ ဒီစျေးကွက်မှာလုပ်စရာအများကြီးရှိသေးတယ်။
Q25 ။ cryptocurrency စျေးကွက်၏ကုန်သွယ်သည့်အချိန်ကားအဘယ်နည်း။
crypto market သည် ၂၄/၇ ဈေးကွက်ဖြစ်သည်။ Forex စျေးကွက်အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ ၂၄/၅ စျေးကွက်သည်အာရှရှိတနင်္လာနေ့မှအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသောကြာနေ့ညနေအထိဖွင့်သည်
Q26 ။ Learn2ကုန်သွယ်ရေးလေ့လာသုံးသပ်သူများကမည်သည့်နေ့စဉ်အခွင့်အလမ်းများပေးသနည်း။
Learn2Trade သည် Forex၊ ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ညွှန်းကိန်းများနှင့် cryptocurrencies တွင်နေ့စဉ်ကုန်သွယ်မှုအခွင့်အလမ်းများကိုပံ့ပိုးပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်မှုareaရိယာပါဝင်သည်; Real-time forex အချက်ပြမှု, တိုက်ရိုက်စျေးကွက်နောက်ဆုံးသတင်းများ 24/7, ကုန်သွယ်ရေးစိတ်ကူးများနှင့်စျေးကွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။
Q27 ။ သင်၏အချက်ပြစနစ်သည်အလိုအလျောက်လားသို့မဟုတ်အချက်ပြများကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်ယူနေသလား။
Learn2ကုန်သွယ်ရေးအချက်ပြမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ forex ကျွမ်းကျင်သူများကတိုက်ရိုက်ပေးသည်။ Skerdian Meta ၏ ဦး ဆောင်မှုဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့သည်စျေးကွက်ကိုစစ်ဆေးပြီးနောက်ဆုံးပေါ်စျေးကွက်ဆန်းစစ်ခြင်း၊ ကုန်သွယ်ရေးအတွေးအခေါ်များနှင့်ကုန်သွယ်မှုအချက်ပြမှုများကိုပေးသောအတွေ့အကြုံရှိလေ့လာသုံးသပ်သူများနှင့်ကုန်သည်များဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာသုံးသပ်သူများက Forex market အပြင် cryptocurrencies, indices and commodities များကိုဖုံးလွှမ်းထားသည်။
Q28 ။ သင် Aussie (Dollarစတြေးလျဒေါ်လာ) နှင့် Kiwi (နယူးဇီလန်ဒေါ်လာ) ကိုသင်ရောင်း ၀ ယ်သလား။
ကျနော်တို့ကုန်ပစ္စည်းငွေကြေးအားလုံး, အထူးသဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာဆန့်ကျင်ကုန်သွယ်။ နောက်ဆုံးတွင် AUD / USD နှင့် NZD / USD တို့သည် Forex Major များဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်တာကိုကြိုက်နှစ်သက်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံကြိုတင်ခန့်မှန်းရတာပိုလွယ်ကူတာကြောင့်ကုန်သွယ်ရေးအမြောက်အမြားကိုဖွင့်တာကိုနှစ်သက်ပါတယ်။
Q29 ။ ပိုကောင်းတဲ့ညွှန်ကိန်း၊ ဆွေမျိုးအင်အားညွှန်းကိန်း (RSI) ဒါမှမဟုတ် stochastics ကဘာလဲ။
ပိုကောင်းတဲ့ညွှန်ပြချက်အဘယ်သူမျှမထိုကဲ့သို့သောအရာရှိပါသည်။ မြောက်မြားစွာသောနည်းပညာညွှန်းကိန်းများရှိပါသည်၊ အနည်းဆုံး ၁၀ ခုသည် RSI နှင့် stochastics အပါအဝင်နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအတွက်အသုံးပြုရန်ကောင်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် RSI ညွှန်ကိန်းနှင့်အလုပ်လုပ်သည်၊ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသော်လည်း၎င်းသည် stochastic မှမကျဆင်းစေသင့်ပါ။
Q30 ။ သင် EUR / USD ကိုဘယ်လိုကုန်သွယ်မလဲ။ ဘယ်လိုနည်းဗျူဟာတွေကိုသင်သုံးမလဲ။ သင်အဲဒါကို ၀ ယ်ရောင်းမလား
Forex အတွဲများကိုအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရာတွင်နည်းပညာနှင့်အခြေခံမဟာဗျူဟာနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသည်။ EUR / USD သည်အဓိကအဓိကစုံတွဲဖြစ်ပြီးအခြေခံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များကိုကောင်းစွာတုံ့ပြန်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤစုံတွဲအတွက်အကောင်းဆုံး forex အချက်ပြမှုများကိုပေးနိုင်ရန်နည်းဗျူဟာများလက်နက်များမှနည်းပညာနှင့်အခြေခံအညွှန်းများကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။
Q31 ။ လာမယ့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်တွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာသည်မည်သည့်လမ်းကြောင်းဖြင့်သွားမည်ဟုသင်ထင်သနည်း။
Forex တွင်မည်သည့်အရာကမျှသေချာမသိပါ၊ ထို့ကြောင့်ခက်ခဲသောစီးပွားရေးဖြစ်သည်။ သို့သော်စျေးကွက်အားမည်သို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရမည်ကိုသင်သိပါကအမြတ်အစွန်းများရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ဤအညွှန်းကိန်းသည်အချို့သောအရေးကြီးသောရွေ့လျားသည့်ပျမ်းမျှနှုန်းများ (ဥပမာရက်ပေါင်း ၂၀၀ ရွေ့လျားပျမ်းမျှအားဖြင့်) ထက်နည်းနေသရွေ့လက်ရှိစီးဆင်းမှုကိုတိုက်ထုတ်ရန်အကြောင်းပြချက်မရှိပါ။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာညွှန်းကိန်းတွင်အရေးပါသောထောက်ခံမှုအဆင့်ကိုချိုးဖောက်ခဲ့ပြီးဤအဆင့်သည်မဝေးတော့သောအနာဂတ်တွင်ခုခံနိုင်စွမ်းရှိသည်။
ဒေါ်လာစျေးအဘို့အဖြစ်နိုင်ဆုံးစျေးကွက် ဦး တည်ချက်နိမ့်သည်နှင့်ဤအရပ်မှကျနော်တို့ 2018 သို့သွားဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
Q32 ။ Bitcoin ကုန်သွယ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကဘာလဲ?
cryptocurrencies အများစုကဲ့သို့ Bitcoin သည်စတင်ဖွဲ့စည်းစဉ်ကတည်းကရေရှည်တိုးတက်မှုရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါလမ်းကြောင်းသစ်အားကောင်းလာပြီ, ဒါကြောင့် Bitcoin ကုန်သွယ်ရန်နည်းလမ်းအနည်းငယ်မျှသာသြဇာနှင့်အတူရှည်လျား (ဝယ်) ရန်ဖြစ်ပါသည်။ လျောက်ပတ်သောပြန်လည်ဆုတ်ခွာရန်စောင့်ဆိုင်းပြီးနောက်အနေအထားကိုဖွင့်ရန်အမြဲအကြံပြုသည်။ နှင့်အတူ Bitcoin တစ်ဝယ်နှင့်ကိုင်ချဉ်းကပ်မှု စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။
Q33 ။ blockchain ဆိုတာဘာလဲ။ ၎င်းသည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း၊ cryptocurrencies အတွက်အဘယ်ကြောင့်အလွန်အရေးကြီးသနည်း။
Blockchain ဆိုသည်မှာအများပိုင်ဖြန့်ဝေထားသောဒီဂျစ်တယ်လယ်ဂျာဖြစ်သည်။ မှတ်တမ်းကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီမွမ်းမံပြီးပါတီအားလုံးတွင်ဤမှတ်တမ်းပါရှိသည်။ Cryptocurrency အရောင်းအ လုပ်ကွက်များတွင်အုပ်စုဖွဲ့နှင့်နာတာရှည်အတွက် blockchain ထည့်သွင်းထားပါသည်။ နောက်ဆက်တွဲလုပ်ကွက်များအားလုံးကိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်ပြီးကွန်ယက်ရှိမတူညီသောပါတီများ၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုလိုအပ်သောကြောင့် blockchain ledger အတွင်းရှိအချက်အလက်များကိုနောက်ကြောင်းပြန်ပြောင်း။ မရပါ။
ဒီရှုထောင့်များကိုစိတ်တွင် blockchain နည်းပညာ Bitcoin အပါအဝင်မြောက်မြားစွာ cryptocurrencies ၏ဗဟို, peer-to-peer သဘောသဘာဝလွယ်ကူချောမွေ့ရန်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။
Q34 ။ Cryptocurrencies အရောင်းအဝယ်အတွက်အကောင်းဆုံးချဉ်းကပ်နည်းကဘာလဲ? ဘယ်နည်းဗျူဟာတွေကိုသင်အကြံပြုမလဲ
ကြောင့်အထင်ရှားဆုံး cryptocurrencies သူတို့ကိုယ်သူတို့တွေ့သောအတွက်အစွမ်းထက်မြင့်တက်, က ဝယ် -and ကိုင်ချဉ်းကပ် အများဆုံးသည်အခြားကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာသာလွန်ခဲ့သည်။
ရှေးရိုးစွဲငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုကိုအသုံးချသည့်အခါ“ ၀ ယ်ရန်နှင့်ကိုင်ထားရန်” cryptocurrency trading / investment မဟာဗျူဟာသည်၎င်း၏ရိုးရှင်းမှုနှင့်ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်တို့ကြောင့်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ unleveraged crypto trading သည်သင်၏အလုံခြုံဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ကြောင်းသိရန်တကယ်အရေးကြီးပါသည်။
Q35 ။ cryptocurrencies ကူးယူ - ကုန်သွယ်နိုင်သလား? တဖန်သင်တို့ကောင်းတစ် ဦး cryptocurrency လူမှုရေးပွဲစားသိလား?
လုံးဝ! အခြားသောကုန်သွယ်မှုကဲ့သို့ပင် cryptocurrencies ကိုကူးယူနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြည့်ပါ eToro cryptocurrency ပြန်လည်သုံးသပ်။။ eToro သည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးလူမှုရေးအကျိုးဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးလက်ရှိတွင်မတူညီသော cryptocurrencies ၇ ခုကမ်းလှမ်းထားပြီးလူကြိုက်များသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ crypto (နှင့်အခြား) ကုန်သွယ်ရေးများကိုအခမဲ့ကူးယူနိုင်သည်။
Q36 ။ သင်အရောင်းအဝယ်အချက်ပြမှုထုတ်ပြန်သည့်အခါသင့်ထံမှအသိပေးချက်များရနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်တယ်။ တစ် ဦး သင်ယူ2ကုန်သွယ်ရေးနှင့်အတူ ပရီမီယံအချက်ပြအကောင့်သင်သည်ကုန်သွယ်မှုကိုနောက်တဖန်မလွဲသွားစေရန်သေချာသည့်လက်ငင်းအသံ၊ မိုဘိုင်းနှင့်အီးမေးလ်အသိပေးချက်များကိုရရှိသည်။